Naya Bikalpa | » पौडेल र यादवका पुत्रद्वय राजनीतिमा प्रवेश पौडेल र यादवका पुत्रद्वय राजनीतिमा प्रवेश – Naya Bikalpa
पौडेल र यादवका पुत्रद्वय राजनीतिमा प्रवेश
प्रकाशित मिती: २०७५ चैत्र ४, ०७: ३७: ४९
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसभित्र नयाँ युवाहरुको आगमनलाई आकर्षित गर्ने कुनै नौला कार्यक्रम नहुँदा नहुँदै पनि पछिल्लो समय काँग्रेसको पक्षमा जनलहर बढिरहेको देखिन्छ । सरकारमा हुँदा पार्टीको भावनाअनुसार नेताहरु चल्न नसकेको काँग्रेसमा समयसमयमा परिवारवाद हावी भएको देखिन्छ ।
गएको निर्वाचनमा पनि नातावाद, कृपावाद र टिकट बिक्री वितरण गरेको आक्षेप लागिरहेको काँग्रेसमा यतिखेर नेताहरुको छोराछोरीहरु तछाड र मछाड गर्दै काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएको देख्न सकिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा लड्दा पराजित भएका रामचन्द्र पौडेलले अन्तत पुत्र चिन्तन पौडेललाई राजनीतिमा तान्न जोडतोड्ले लागिपरेका छन् ।
उनले छोरा मात्र होइन पुत्री संज्ञा पौडेल (पोखरेल) लाई समेत जर्बजस्त राजनीतिमा छिराउने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा कुनै भुमिका ननिभाएका यस्ता पात्रहरुले फेरीपनि काँग्रेसमा छिद्राको रुपमा देखिएका छन् । उनले छोरा चिन्तनलाई पाँच बर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचय पत्र वोर्डको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति दिएर राजनीतिमा प्रवेश गराउने संकेत दिएका थिए ।
एक बर्षअघि नेता पौडेलले छोरा चिन्तनलाई अघि सार्दै युवा जागरण अभियान नामक संस्था खोलेका थिए । त्यही संस्थाको बार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार उनले राजधानीमा नीति बहस कार्यक्रमको आयोजना गरी करिव २ सय युवालाई भेला पारेका थिए । युवा जागरण अभियानको उपाध्यक्षमा भने कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका पुत्र डा. सुवाषचन्द्र यादव रहेका छन् ।
नेता पुत्रहरुको कार्यक्रमलाई औपचारिकता र बैधानिकता दिनकै लागि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइराला र केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डे अनुपम फुडल्याड बत्तिसपुतली पुगेका थिए । घुँडाको समस्याले राम्रोसँग हिँडडुल गर्न नसक्ने कोषाध्यक्ष यादवले समेत आगामी पार्टी महाधिवेशनदेखि नै छोरालाई राजनीतिमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउने योजना बनाएको बुझिएको छ ।
तत्कालिन कांग्रेस सिरहाका सभापति रहेका सीतादेवी यादवका पतिको २०५७ सालमा विद्रोही माओवादीले गोली हानी हत्या गरेका थिए । पतिको हत्यापछि राजनीतिमा आएकी सीतादेवी यादव जिल्ला सभापति हुँदै कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुने कांग्रेसका अवसर पाउने सीमित महिलामा पर्छिन् । दुई बर्षअघि मंसिरमा पोखरामा भएको तरुण दलको महाधिवेशनमा पुत्र चिन्तनलाई अघि सार्ने रणनीति बनाएका पौडेललाई तत्काल महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले असहमति राख्दै आफ्ना भतिज सिद्धार्थ कोइरालालाई महामन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । डा. रामशरण महतले पनि आफ्नै भतिजलाई तरुण दलको नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका थिए ।
तरुण दलमा सबै भूगोल, बर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भन्दै आफ्नै परिवारका सदस्यमा तरुण दललाई सीमित गर्न खोजेपछि महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया नअपनाई सर्बसम्मत भन्दै जीतजंग बस्नेतको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय तरुण दल बनाइएको थियो । यसरी काँग्रेसमा लागेर दुःख पाएका कार्यकर्ताको मूल्यांकन नगरी नेता परिवारका सदस्यहरुको आगमन हुँदा आम कार्यकर्ता भने पार्टी कार्यालयमा आक्रोशित भएका छन् ।
२०७५ चैत्र ४, ०७: ३७: ४९